မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: ရှိုင်သွာန်၏ လှည့်ကွက်
ဟဒီးစ် : တစ်နေ့အီဗလီးစ်သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး၏နေအိမ်သို့ အကျည်းတန်သောအဖိုးအိုတစ်ယောက်အသွင် အယောင်ဆောင်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး၏နေအိမ်သို့သွားချင်လို့တော့မဟုတ်ပါ။ ၎င်းနှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး အမေး အဖြေလုပ်နိုင်ရန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှ အီဗလီးစ်အား တမန်တော်မြတ်အိမ်သို့သွားရန်အမိန့်ပေးခံရ၍ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တမန်တော်မြတ်ကြီးမှ အီဗလီးစ်၏ အလုပ်များကိုမေးမြန်းရာ အီဗလီးစ်မှ ဤသို့ပြောပါတယ်။
'' အိုးမိုဟာမတ် သင်သိပါ၏လော ကျုပ်တွင်လက်ရုံးပေါင်း ၇၀ ၀၀၀ ရှိ၏။ လက်ရုံးတစ်ကောင်လျှင် ရှိုင်တွာန်နောက်လိုက် ၇၀ ၀၀၀ ဆီရှိ၏။ လူတို့အား အောက်တန်းကျစေ၍ လူအများသေကြေပျက်စီးစေသော စစ်ပွဲများဖြစ်စေရန် လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကို ကျုပ်သွေးဆောင်မည်။ သင်၏နောက်လိုက်သားများအားနည်းမျိုးစုံနှင့် လှည့်စားဖြားယောင်း သွေးဆောင်မည်။ ကျုပ်အသက်နှင့် ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ဖြားယောင်းသွားမည်။ ''
ရှိုင်တွာန်၏ ဖြားယောင်းသွေးဆောင် နှောင့်ယှက်မှုကို လူသားတိုင်းခံကြရပါတယ်။ စိတ်နှင့်ပြစ်မှားမှု၊ ကိုယ်နှင့်ပြစ်မှားမှု၊ အပြောနှင့် အလုပ်မညီစေရန်၊ လူအချင်းချင်းအငြင်းပွါးနေကြရန်၊ ဟရမ်ကို မသိဘဲကျူးလွန်မိရန်၊ သိလျှက်နှင့်ကျူးလွန်နေရန်၊ တစ်ဦးကို တစ်ဦးနားလည်မှုလွဲမှားစေရန် စတဲ့အကြောင်းပေါင်းများစွာမှာ ရှိုင်သွာန်၏လှည့်ကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟရမ်ကိုရှောင်ကြည်ကြပြီး ဟလာလ်လမ်းပေါ်မှာ ကြိုးစားကျင့်သုံးနေသူတွေ ကိုလည်းနောက်နည်းတစ်မျိုးနဲ့ ဖြားယောင်းပြန်တယ်။အဖြစ်မှန်တွေကို နမူနာအဖြစ်ပြရလျှင်
၁) လူတစ်ယောက် ဆေးလိပ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုသိပြီး နှစ်ရှည်သောက်လာတဲ့ဆေးလိပ်ကို ရအောင်ဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီး ငွေစုခဲ့တယ်။ အရင်ဆိုးခဲ့သမျှကိုလည်းပြန်လိမ္မာအောင်ပြုပြင်တယ်။ သူများအရက်လာ တိုက်လည်းမသောက်ဘူး။ စိတ်သာအဓိက စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင် ဘယ်သူမှသူ့ကိုတိုက်တွန်းလို့မရဘူးလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်ကို သွေးဆောင်နိုင်တဲ့ ရှိုင်သွာန်ကို သူမယုံခဲ့ဘူး။ မကြာပါဘူး သူ့စီးပွါးရေးကျခဲ့တယ်။ သူစိတ်ထိခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူဖြတ်ထားတဲ့ ဆေးလိပ်ဘူး က သူ့အိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ သူ့အမျိုးကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်ယူလာပေးတာပါ။ အဲတော့ နှလုံးသားမှာ အီမာန်မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အနားမှာရှိတဲ့ ဆေးလိပ်ကို ယူဖွာတော့တာဘဲ။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီးကိုအဆိုးမြင်တဲ့ အတွေးထောင်ထဲမှာ သူ့ကိုယ်သူနစ်ထားလိုက်တယ်။ (သူ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ရှိုင်တွာန်ကတော့ ဘေးကကြည့်ပြီးဟားတိုက်ရီနေမှာဘဲ)
၂) မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူမဟာအလှအပကိုအလွန်နှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်မြတ်ကိုချစ်ကြောက်ရိုသေမှုကြောင့် အရှင့်အမိန့်နာခံရန်အတွက် သူမအလွန်နှစ်သက်တဲ့ အလှအပတွေကိုစွန့်လွှတ်ထားတာအလွန်ကြာပြီ။နှစ်သစ်မှာတော့ သူမအိမ်ကိုလက်ဆောင်တစ်ထုတ်ရောက်လာပါတယ်။ သူမဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လက်သည်းဆိုးဆေးတွေ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်။ စာဖတ်သူများသိတဲ့အတိုင်း cosmatic အများစုမှာဟရမ်ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖော်စပ်ထားပါတယ်။ သူမလက်ထဲကို ၎င်းပစ္စည်းတွေရောက်သွားပေမယ့်လည်း အလဟမ်းဒို့လိလ္လာဟ် သူမစိတ်က အီမာန်ခိုင်မြဲနေဆဲမို့ ၎င်းပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
၃) နောက်အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် သူ့တို့မိသားစုတစ်အိမ်သားလုံး ရုံးပိတ်ရက်မှာအိမ်ပိတ်ပြီးအပြင်သွားလည်ကြတယ်။ သူတို့အိမ်အပြင်သွားလည်နေချိန်မှာ အိမ်ကိုဧည့်သည်လာပြီး အိမ်ရှေ့ကလှမ်းခေါ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ အဲဒီ ဧည့်သည်နဲ့ အိမ်ရှင်တို့တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်က အဲဒီအိမ်ကိုရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ အိမ်ထဲမှာလူတွေတွေ့လို့ အိမ်ရှေ့ကအကြိမ်ကြိမ် အော်ခေါ်ပေမယ့်လည်း သူ့ကိုဘယ်သူမှလှည့်မကြည့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ အိမ်ရှင်အစ်ကိုကြီးက အဲဒီနေ့ အဲဒီအချိန် အိမ်သော့ခပ်ပြီး တစ်အိမ်လုံးအပြင်သွားနေကြောင်းရှင်းပြတယ်။ အိမ်ရှင်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ရှင်နဲ့တူတဲ့လူတွေက ဘာကြောင့်ရောက်နေတာလဲ ???
၄) လျှပ်ပေါ်လော်လီပုံများကိုကြည့်ခြင်း။ မြင်လိုက်ခြင်း၊ သိမ်းထားခြင်းတို့မှာ ကြည့်သူ မြင်သူတို့အတွက်စိတ်အရသာတစ်ခု၊ စိတ်လှုတ်ရှားမှု၊ စိတ်နှင့်ပြစ်မှားမှုတို့ဖြစ်စေပြီး လူ့အသိုင်းအဝန်းထဲမှာယနေ့ထိတိုင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများစွာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမှုအခင်း၏ သားကောင်တို့မှာအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး၊ အပြစ်မဲ့သောကိုယ်ဝန်များဖျက်ချခြင်းခံကြရတယ်။ အချို့နိုင်ငံများ၏ ဥပဒေ အရ မုဒိန်းကြောင့်ရလာသောကိုယ်ဝန်၊ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘဲ ရလာသောကိုယ်ဝန်များကို ဖျက်ချပိုင်ခွင့်ပြုထားတယ်။ အချို့နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရဆိုလျှင် ကိုယ်ဝန် ၇ လထိဖျက်ချခွင့်ပေးထားကြတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၇ လဆိုသည်မှာ မွေးခါနည်း ကိုယ်လက်အင်္ဂါစုံလင်နေသောကလေးအရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းမှာလည်း လူသတ်တာကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။
သုသေသီများ၏ မှတ်ချက်အရ လျှပ်ပေါ်လော်လီပုံများကို ကြည့်သူ၊ မြင်သူတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လှိုင်းခတ်နိုင်တယ်။ သွေးသားအရ ၎င်းပုံများကို မြင်ခြင်း၊ ကြည့်ခြင်းဖြင့် ယောက်ျားများအတွက် တဏှာစိတ်ဖြစ်စေသလို၊ မိန်းကလေးမှာလည်း မိန်းကလေးအချင်းချင်းပုံကြည့်ခြင်းဖြင့် ထိုစိတ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယခုခေတ် လျှပ်ပေါ်လော်လီပုံတွေမှာ အမျိုးသမီးပုံတင်မက အမျိုးသားပုံတွေပါ များစွာရှိပါတယ်။.လူအများသုံးသော FB မှာလျှပ်ပေါ်လော်လီပုံဝတ်ထားသော မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်ပုံများတင်သော လူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးမှာသဘောကျ၍ တင်တာသိသာပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ ဝေဖန်ရန်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုမြင်သော သူငယ်ချင်းမှ မင်းတင်တဲ့ပုံကြောင့် ငါ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လို့လာပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်စလင်မ်များအနေနှင့် မိမိမျက်လုံးကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းပုံများနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေး ဝေဖန်ရာမှာ ပုံကိုမတင်ဘဲ စာနှင့်အကျိုးအကြောင်းရေးသည်က အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုမွတ်စလင်မ်တိုင်း သိနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်မှုရှိသော လူကြီးများက လူငယ်များကို သင်ပေးရပါမည်။ လူငယ်များမှလည်း တွေ့မြင်သည်များကို ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် စဉ်းစားချင့်ချိန်ရပါမည်။ မလုပ်ခင် အရင်စဉ်းစားပါ။.သာသနာနှင့်ပတ်သက်သော စာပေများမျှဝေနေသူများလည်းသတိထားရပေမည်။ အကယ်၍မွတ်စလင်မ်ဂရုပ်လုပ်နေသော အဒ်မင်ဖြစ်နေပါလျှင် ပို၍သာ သတိထားဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း မွတ်စလင်မ်မောင်နှမများကိုအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှိုင်တွာန်၏ လှည့်စားဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုများမှ ကာကွယ်ရန်အောက်ပါ ဒိုအာကိုလည်းမျှဝေလိုက်ပါတယ်။.رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِوَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ.ရဗ်ဗေ့၊ အအူးသို့၊ ဗေ့က၊ မင်န် ဟ-မ-ဇာတစ်ရှ်၊ ရှယာတွီးနေ့၊ဝ-အအူးသို့၊ ဗေ့က၊ ရဗ်ဗေ့၊ အန်-ယ်-ယဟ်သွို့ရူးန်။ကုအာန် (၂၃ : ၉၇)
More knowledge, more survive.
Posted by Ordinary person at 5:50 PM